Ihe bụ ihe nchekwa na-eme ka ọ dị mma karịa mmiri | Rayson
Ma ọ dịkarịa ala, ndị Palestini 30,000 gara na nke Gaza Wip na-achịkwa site na ndị Alakụba Islam Hamas. Na Gaza City, a na-enye ndị na-emepụta ihe nkiri United States na Israel. Ndị na-eme ngagharị iwe na Afghanistan kpaliri akpụrụ Obama ma kpọọ onye amaala America. S. The ọkọlọtọ mgbe ekpere Fraịde si na mpaghara mpaghara Nangarhar.
Nchọpụta nyocha nke otu ntinye aka (i) na Control House (C) enyocha ugboro abụọ. Na mbido (October ruo Nọvemba 1998 T1) na njedebe nke ọmụmụ, ọnwa ise gachara (T2, Machị ruo Eprel 1999). N'oge ọmụmụ ihe ahụ, otu ihe ntinye ahụ natara Protocol nlekọta anụ ahụ. Ebe ọrụ ọ bụla na-enye mmemme agụmakwụkwọ na ndị otu ọrụ dị n'ihu (10-20)